तपाईलाई थाहाँ छ एक मुखे रुद्राक्षले मानबिय जीवनमा के फाइदा गर्छ ? के एक मुखे रुद्राक्ष हुदैमा धन,धर्म र भाग्यको उदय हुन्छ ? - Sudur Khabar
तपाईलाई थाहाँ छ एक मुखे रुद्राक्षले मानबिय जीवनमा के फाइदा गर्छ ? के एक मुखे रुद्राक्ष हुदैमा धन,धर्म र भाग्यको उदय हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०७:२२
नोट: रुद्राक्षको बारेमा हामीले हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई सोधेर लेखेका हौँ, यदि तपाई कसैको धर्म अथवा आस्था विरुद्ध केहि शब्द लेखिएको भए कृपय हामीलाई जानकारी गराउनु होला ! यदि तपाई संग रुद्राक्षका फाईदाहरु बारे केहि सल्ला सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो यो पोस्ट मन परे साथीलाई सेयर गर्नु होला !!